‘सेकेण्ड ह्याण्ड' कार किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘सेकेण्ड ह्याण्ड' कार किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् !
पुस १७, २०७६ बिहिबार १४:२८:१५ | उज्यालो सहकर्मी
आफ्नै कारमा यात्रा गर्ने चाहना र सपना धेरैकाे हुन्छ । तर आर्थिक अवस्था र कमाइले सबै इच्छा वास्तविकतामा रुपान्तरण नहुन सक्छ । कार चढ्न चाहनेहरुका लागि 'सेकेण्ड ह्याण्ड कार' अहिले राम्राे विकल्प बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सेकेण्ड ह्याण्ड कारको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा गरेको कडाइसँगै किस्ताबन्दीमा नयाँ कार किन्न चाहनेहरुको रोजाइमा समेत सेकेण्ड ह्याण्ड कार पर्न थालेको छ ।
आर्थिकरुपमा सक्षम व्यक्तिहरुका लागि पनि आकर्षण बनेकाे छ, सेकेण्ड ह्याण्ड कार । तर अन्य गाडीजस्तै पुरानो कार किन्दा पनि धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्छ ।
सेकेण्ड ह्याण्ड कार किन्नुअघि तपाईँले आफ्नाे मासिक कमाइअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । आफूसँग कति बजेट छ ? कति मूल्यसम्मको कार किन्न चाहेको हो, त्यसको निर्धारण गर्नुपर्छ । कर्जामा कार किन्दा मासिक किस्ता तिर्न सक्ने हिसाबले निर्णय गर्नु पर्छ ।
ब्राण्ड र मोडल
आफूले कुन ब्राण्डकाे कार किन्न चाहेको हो, त्यसको सूची तयार पार्नु पर्छ । सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मोडलबारे सबै जानकारी लिनु पर्छ । गाडीमा कस्ता विशेषता छन् ? डायमेन्सन कति छ ? आफ्नो आवश्यकताअनुसार छ या छैन बुझ्नु पर्छ । खरिदकर्ताले आधिकारिक र प्रमाणित मोडल मात्रै रोज्नुपर्छ । अतिरिक्त वारेन्टी तथा वास्तविक 'म्यानुफ्याक्चर' को वारेन्टी पाइने भएकाले पनि यस्ता रिकन्डिसन कार छनौट गर्दा फाइदा पुग्ने गर्छ ।
आफूले खरिद गर्न चाहेको गाडीको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नु पर्छ । टायर, ब्रेक, क्लच, गियर बक्स, सस्पेन्सन, इञ्जिनलगायतका स्पेयर पार्टको अवस्था बुझ्नुपर्छ । कार कति किलोमिटरसम्म चलाइ सकिएको छ, अनिवार्यरुपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । सामान्यतः बढीमा चार वर्ष वा ४० देखि ५० हजार किलोमिटरसम्म गुडेकाे कार छान्नु पर्छ । त्यस्ता गाडीको टायर, इञ्जिन, गियर बक्समा समस्या आइसकेको पनि हुन सक्छ ।
विशेषतः कुन कम्पनीका गाडीको रिसेल भ्यालु कति आउँछ, भन्ने बुझेर मात्रै कार छान्नु पर्छ । पछि बेच्न परेको अवस्थामा बेच्न पनि गाह्रो हुने र आफूले किनेको मूल्यभन्दा धेरै सस्तोमा बेच्न पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म प्रतिष्ठित, स्थापित र रिसेल भ्यालु बढी दिने कम्पनीको कार मात्रै छनाेट गर्नु पर्छ ।
कारको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि कारको टेस्ट ड्राइभ अनिवार्यरुपमा गर्नु पर्छ । टेस्ट ड्राइभको क्रममा कारको सजावट, सिट, कभर, ब्रेकलगायतले कस्तो काम गर्छ, अनुभव गर्नु पर्छ । सबै ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्दा खराबी भएकाे वा नभएको थाहा हुन्छ । कार किन्नेले एकपटक टेस्ट ड्राइभ गर्नै पर्छ । इञ्जिनबाट आवाज कस्तो आउँछ, त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
पेपरवर्क र नामसारी
कारको टेस्ट ड्राइभपछि कार किन्ने या नकिन्ने निर्क्याैल गर्नु पर्छ । किन्ने टुङ्गो भएपछि कार आफ्नो नाममा नामसारी गर्नुपर्छ । यसको लागि आफैं यातायात व्यवस्था विभागमा उपस्थित भएर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ ।
सेकेण्ड ह्याण्ड कार खरिद गर्नु पहिले पेपर डिल गर्नुपर्छ । पेपरवर्क जाँच गर्नको लागि रजिस्ट्रेसन बुक, बील अन्य काजपत्र हेर्नुपर्छ । अन्त्यमा गाडीको कागजपत्र, कर तिरेकाे या नतिरेको विवरण पनि हेर्नै पर्छ ।